कता जाला सेयर बजार यो साता? - Laltin.com
कता जाला सेयर बजार यो साता?
आईतबार भाद्र २७ देखि बिहीबार भाद्र ३१ गते सम्म:
गत हप्ता नेप्से बिहीबार २८१२.३८ अङ्क पुगेर साताको अन्त्यमा -२.२१% साप्ताहिक गिरावट आएको छ। बिहीबारको कारोबार रकम रु ८.९३ अर्ब तथा साता भरिमा ३७.८९ अर्बको रहेको छ । यो हप्ता नेप्से ६३.५९ बिन्दुले तल झरेर करेक्सन निरन्तरता भएको देखिन्छ । लगातार भाद्र ३ बिहीबार देखि घटेको नेप्से चार साता समग्रमा -११.५३% ले घटेको छ ।
बोलिन्जर ब्याण्ड विश्लेषणले भोलाटिलिटि यो हप्ताको सुरुको ४ दिन घटिरहेको तर बिहीबार चाहिँ बढेको देखाएको छ।
अपर ब्याण्ड र क्लोजिङ्गको अन्तर भने साताको पहिलो दिन ३३१.२४७ रहेको थियो र बढेर बिहीबार भने ४०४.२५७५ पुगेको थियो। साथै अपर ब्याण्ड, लोअर र मिडल ब्याण्ड तीन ओटै तल झरेको छ।
यसैगरी एमएसीडी लाइन र सिग्नल लाईनको फरक साताको पहिलो दिनबाट घट्दै गएको थियो तर बिहीबार भने बढेको देखिन्छ। यो साताभरि एमएसिडि लाइन र सिग्नल लाइन दुबै जेरो लाइन भन्दा मुनि नै रहेको छ र यसले नेप्सेमा डाउनसाइड मोमेन्टम बढ्दै गएको जनाउँछ।
साताको पहिलो दिन एडीएक्स लाइन ३२.१५५० बाट थोरै घटेर ३१.२५९७ पुगेको छ भने हप्ताको पहिलो दिन ‌+डिएमआई १७.६३८८ देखि थोरै घटेर १६.५७५६ पुगेको छ र – डिएमआइ‍‍ १४ लाइन साताको पहिलो दिन ३२.११४९ देखि बढेर ३९.३२२८ मा पुगेको छ। +१४ डिएमआई लाईन र -१४ डिएमआई लाईन साताको अन्तिम दिनहरुमा डाइभर्जिङ दिशामा गएको देखिन्छ जसले बजार डाउनसइडमा रहेको संकेत गर्छ।
गत २० दिनको औसत भोल्युम ११.४९ अर्ब रहेको छ भने साताको अन्त्यमा भोल्युम औसत भन्दा २.५ अर्बले कम रहेको छ। यसरी क्युमुलेटिभ एडी लाइन, भोल्युमको विश्लेषण र क्याण्डलस्टिकले समग्रमा नेप्सेले आफ्नो डाउनसाइड मोमेन्टममा नै रहेको देखिन्छ र बजार भारी करेक्सनमै रहेको देखिन्छ।
अहिले सम्मको ट्रेण्ड हेर्दा जुन हप्ता बजार घट्छ, त्यसको लगत्तै कारोबार खुल्दा बजार माथि जाने गरेको देखिएको छ। यदि सोहि ट्रेण्ड कायम रह्यो भने, यस हप्ता पनि सोमबार बजार खुल्दा बजार माथि जाने सम्भावना देखिन्छ। यद्दपि यसलाई बजारले माथिको गति समात्ने लक्षण मान्न सकिँदैन। प्राविधिक विश्लेषणले बजारले २७०० को बिन्दु छुने प्रबल सम्भावना देखाएको छ।
Previous: कसैलाइ मालामाल त कसैलाइ कंगाल बनाउदै सेयर बजार
Next: सेयर बजारको आगामी यात्रा २५०० तर्फ वा ३५०० तर्फ?